Mgbasa Ozi Di omimi nke Igwe Igwe Igwe Na-aga n'ihu | Martech Zone
Mgbasa Ozi Di omimi nke Igwe Igwe na-aga n'ihu
Thursday, July 7, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Ọ bụ Jessica Hawthorne-Castro
Dika usoro mgbasa ozi dijitalụ na-aba ụba na morph, ụlọ ọrụ na-etinyekwu ego na mgbasa ozi telivishọn iji ruo ndị na-ekiri ha na-etinye awa 22-36 na-ekiri TV kwa izu.
Agbanyeghị ihe mkpọsa mkpọsa mgbasa ozi nwere ike iduga anyị ikwere n'ime afọ ole na ole gara aga na-ekwu banyere mbelata nke telivishọn dị ka anyị si mara ya, mgbasa ozi telivishọn bụ nke dị ndụ, nke ọma, ma na-arụpụta nsonaazụ siri ike. Na nso nso a Ọmụmụ MarketShare nke ahụ nyochara arụmọrụ mgbasa ozi n'ofe ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka telivishọn, ngosipụta n'ịntanetị, nyocha a na-akwụ ụgwọ, mbipụta na mgbasa ozi redio, MarketShare chọpụtara na TV nwere arụmọrụ kachasị elu iji nweta isi ngosipụta arụmọrụ, ma ọ bụ KPI, dị ka ahịa na akaụntụ ọhụrụ. Mgbe atụnyere arụmọrụ na mmefu mmefu yiri nke a, TV gbara okpukpu anọ karịa ahịa dijitalụ.
N'ezie, 2016 nwere ike ịbụ otu n'ime afọ ndị kachasị baa uru maka mgbasa ozi TV, na-ekele na akụkụ nke Super Bowl 50-nke setịpụrụ ebe a na $ 4.8 nde, nke 30 nke abụọ. Dabere na Oge Mgbasa Ozi, mkpokọta mgbasa ozi etinye na azụmahịa na Super Bowl site na 1967 ruo 2016 (ma gbanwee maka onu oriri) bụ $ 5.9.
Ego atụmatụ Super Bowl 50 nke 2016 US mgbasa ozi mgbasa ozi TV mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ndekọ 2.4%, okpukpu abụọ na 2010 (1.2%), okpukpu anọ ọkwa na 1995 (0.6%), na ugboro isii ọkwa ahụ na 1990 (0.4% ). Nnukwu egwuregwu ahụ gbasoro nzọụkwụ nke otu ụzọ n'ụzọ anọ siri ike maka mmefu TV, nke, dị ka Mediakpụrụ Mgbasa Ozi, hụrụ na mkpokọta mmefu TV na-abawanye site na 9 pasent na njedebe nke 2015. Ọktoba 2015 bụ ọnwa mgbasa ozi kachasị mma kemgbe ọnwa Jenụwarị 2014-mana otu ngosipụta nke mgbasa ozi TV na-aga n'ihu ma na-eto eto.
Otú ọ dị, enweghị ịgọnahụ na kama ịdalata nke TV, mkparịta ụka ahụ kwesịrị ịkwụsị na anyị na-enwe mgbanwe na-aga n'ihu nke TV na ikiri - dịka ọdịdị nke ndụ. N'agbanyeghị ọtụtụ ihuenyo na nhọrọ nnyefe ha bara, ndị na-ekiri ha ka na-elekwa telivishọn anya — na mgbasa ozi na-eso ya. Dabere na The Wall Street Journal si Ọ bụrụ n ’Iche na TV Anwụọla, Ikekwe You're Na-atụle Ihe Ọjọọ, ndị okenye nọ n'afọ ndụ niile na-ewepụta oge iji TV karịa oge ọ bụla. N’ikwu banyere nha Nielsen, isiokwu a rụtụrụ aka na ndị okenye na-etinye ihe dị ka awa 36 kwa izu na-ekiri TV, ebe ha na-etinye ihe dị ka awa asaa na ekwentị ha. Maka ụmụaka dị afọ 18-34, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa iri abụọ na abụọ na-elele TV mgbe ihe dị ka elekere iri na-eji na ekwentị.
Mgbe ejikọtara ha, ọnụ ọgụgụ ndị a na ihe ndị mere eme na-ese onyinyo ọnọdụ mgbasa ozi TV nke na-ada ụda, na-arụ ọrụ, ma baakwa uru. Ma mgbe onye na-ajụ mmụọ adịla ogologo maka ịbụ oké ọnụ - nkwupụta nke tolitere dị ka nhọrọ dijitalụ dị ọnụ ala batara na foto-anyị ahụla ezigbo mbịaghachi nke mmasị na TV gafee ọtụtụ ụdị ndị mgbasa ozi. Ya mere, mgbe ọkọlọtọ na ngosipụta mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe dị ọnụ ala karịa iji bido mepụta ma bipụta ya, nkezi ịpị ịpị nke ụdị mgbasa ozi gafee usoro niile na ntinye ego ka bụ pasent 0.06 dị ala. Ọzọkwa, 54% nke ndị ọrụ anaghị pịa mgbasa ozi ọkọlọtọ n'ihi na ha atụkwasịghị ha obi, ụmụ afọ 18 ruo 34 yikarịrị ka ha ga-eleghara mgbasa ozi n'ịntanetị anya, dị ka ọkọlọtọ na ndị nọ na mgbasa ozi mmekọrịta na igwe na-achọ ihe, atụnyere TV, redio, na akwụkwọ akụkọ ọdịnala.
TV dị ka usoro ọdịnala ka dị mkpa. Mgbe anyị na-agba ọsọ oge TV, anyị na-ahụ ibuli elu na ahịa na mmata ngwaahịa. Anyị kwesịrị ịgba ọsọ izu abụọ nke dijitalụ iji nweta otu ụbọchị nke mgbasa ozi, Rich Lehrfeld, agadi VP-ahịa ahịa ahịa na nkwukọrịta na American Express
Ugbu a, ọ bụ ezie na mgbasa ozi TV na-arụ nnukwu ọrụ nke ijide onwe ya, nke ahụ apụtaghị na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ, usoro "hip" na usoro mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ na ịchọrọ n'ezie mkpọsa ọhaneze zuru oke dị irè n'ofe nyiwe niile. Yabụ mgbe ọ ka bụ ọkpụkpọ maka ụlọ ọrụ gafee ọtụtụ ngalaba azụmaahịa dị iche iche, TV na-agbakọ nke ọma ma bulie mbọ mgbasa ozi maka ọwa ndị ọzọ niile dị ka vidiyo ịntanetị, mmemme mmemme, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka, wdg.
Dika ikpo okwu nke agnostic a, dika imaatu, TV n’enye ndi mgbasa ozi ohere ka ha rita n’elu ihe di n’elu (ya bu, OTT na-ekwu maka nzipu nke odiyo, vidio na ihe ndi ozo n’inweta n’elu intaneti n’enweghi otutu onye oru ihe. njikwa ma ọ bụ nkesa ọdịnaya) na ohere ndị ọzọ iji rute ndị na-ege ha ntị n'ọtụtụ nyiwe dị iche iche (dịka, eriri, netwọkụ, yana ndị nwere onwe ha dị ka Netflix na Hulu).
Mgbasa mgbasa ozi nke ugbu a bụ ihe akaebe nke ike telivishọn dị ka ozi na usoro nnyefe ọdịnaya. Dị ka Nielsen si kwuo, ndị tozuru oke ịtụ vootu na-etinye nkezi nke 447 nkeji kwa ụbọchị na-ekiri TV, nkeji 162 na-ege ntị na redio, na naanị 14 nkeji na 25 nkeji na-ele vidiyo na ekwentị ha na mbadamba (n'otu n'otu).
Dabere na New York Times 'Derek Willis, ọ nweghị ihe ga-ewepu telivishọn dị ka etiti nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na 2016.
Ndị okenye na-ekiri telivishọn jiri nkezi nke awa 7.5 kwa ụbọchị n'ihu setịpụrụ n'ime ọnwa atọ mbụ nke … karịa oge ndị mmadụ na-etinye na kọmputa nke ha, ekwentị, na mbadamba. Ndị agadi America - n'etiti ndị ntuli aka a tụkwasịrị obi - lelee telivishọn karịa ndị ibe ha. Kedu ihe kpatara telivishọn ka bụ eze maka mkpọsa mmefu.
Enweghị agọnahụ na TV ka bụ mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị mma n'ebe ahụ mana ị ka kwesịrị ijikọ mkpọsa n'ofe nyiwe ndị ọzọ (weebụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ekwentị mkpanaaka, wdg) - yabụ n'ihi na anaghị esite na TV emepụta nzaghachi ozugbo - mana site na na-eji siri ike nchịkọta ị nwere ike ịchọpụta na mfe mmetụta halo na telivishọn nwere na dum mkpọsa. Yabụ ka ngwaọrụ na-abawanye na gburugburu ebe obibi mgbasa ozi na-arịwanye elu, awa 36 ahụ ndị toro eto na-ekiri TV kwa izu (yana awa 22 maka ọtụtụ puku afọ), anaghị agha ụgha- ma nloghachi na itinye ego na ndị mgbasa ozi na-aga n'ihu na-aghọrọ site na ntinye ego ha. na mgbasa ozi na ihe okike.
Tags: ad-mmefuige ntiAdweekAmerican Expressagbasa ozi n'ikukudere willishuluòkè ahịaNetflixọhụrụ york ugboronielsenottkarịrị ọdịnaya dị n'elusuper nnukwu eferetelivishọntelivishọn mgbasa ozitvEmepụtara TV adTV azụmahịa
Ọ bụ Jessica Hawthorne-Castro
Ghọta Mkpa Ntuziaka Ntuziaka Ngwaahịa (IQG)
Delivra na - agbakwunye Nhazi E-Azụmaahịa na Nkewa